I-OEM SUP-P260G Imboni yemitha yezinga eliphezulu lezinga lokushisa eliphezulu kanye nabakhiqizi |I-Sinomeasure
I-SUP-P260G imitha yezinga lezinga eliphezulu lezinga lokushisa eliphezulu
Umumo ohlangene, ukulinganisa okunembile.Ngokuvumelana ne-fluid mechanics, ukusetshenziswa kwe-cylindrical arc shape, imidiya esebenzayo ukuze kube nomthelela weprobe phansi ukunciphisa umthelela wokuzamazama kwe-probe ekuzinzeni kokulinganisa.
Amanzi amaningi futhi angangenisi uthuli.
Isendlalelo sokuqala sokuvikela: i-316L sensor diaphragm, uxhumano olungenamthungo, ukuqinisekisa ukuthi umthofu kanye ne-sensor probe waterproof;
Isendlalelo sesibili sokuzivikela: umklamo wepayipi lokucindezela, ukuqinisekisa ukuthi ungqimba oluvikelayo kanye nezingubo zokunamathisela okuholela, zingangeni manzi, zingangeni uthuli;
Isendlalelo sesithathu sokuvikela: 316L impahla, ukuxhumana okungenamthungo, ukuqinisekisa ukuthi umthofu nesihlangu ukuxhumana okungenamthungo, okuvalekile, ukwakheka okungonakali;
Isendlalelo sesine sokuvikela: izinga eliphezulu, ungqimba oluyisivikelo oluyinkimbinkimbi, ubuchwepheshe obuyindida bokuvikela amanzi ukuze kuqinisekiswe ukuthi akukho ukutholwa kokuvuza koketshezi;
Isendlalelo sesihlanu esivikelayo: umugqa ogqamile ongu-12mm wekhwalithi ephezulu ongangenisi amanzi, impilo yesevisi efinyelela eminyakeni emi-5, ukucwiliswa emanzini isikhathi eside akugqwali, kuhlala isikhathi eside, akonakali.
Umkhiqizo I-level transmitter
Linganisa ububanzi 0 ~ 1m;0 ~ 3m;0 ~ 5m;0 ~ 10m
Isixazululo senkomba 0.5%
Izinga lokushisa elimaphakathi -40℃～200℃
Isignali yokuphumayo 4-20mA
Ukugcwala kwengcindezi 300% FS
Ukunikezwa kwamandla kagesi Idatha ye-24VDC
Impahla sekukonke Ingqikithi: 316L;Igobolondo: 304 impahla
I-SUP-P260-M3 Imitha yezinga elingaphansi kwamanzi
I-SUP-P260 Imitha yezinga elingaphansi
I-SUP-PX261 imitha yezinga lezinga eliphansi
I-SUP-P260-M2 inzwa yezinga le-slurry submersible lev...
SUP-P260-M4 Izinga elingaphansi kwamanzi kanye nezinga lokushisa m...
I-SUP-P260-M5 Imitha yezinga elingaphansi kwamanzi